Wejiga 2-aad ee shirka wadatashiga Somalida oo Garowe ka furmi doona 15-ka bisha December. – Radio Daljir
Wejiga 2-aad ee shirka wadatashiga Somalida oo Garowe ka furmi doona 15-ka bisha December.
Garowe, Dec 03 – Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen M/weynaha Puntland C/raxmaan Maxamed Faroole iyo Amb. Mahiga, wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Somaliya ayaa lagu iclaamiyey in wejiga 2-aad ee shirka wadatashiga Somalidu uu ka furmi doona Garowe 15-ka bisha December.
Labada mas’uul ayaa sheegay in ay isla meel dhigeen in shirku uu socon doono 15-ka illaa 18-ka bisha December, ayna ka soo qayb gali doonaan madaxda maamulada ka jira Somaliya sida dawlada federaalka ah, Puntland, Galmudug, iyo Ahlu-sunna.
Qodobka ugu muhiimsan ee lagu gorfayn doonaa wejiga 2-aad ee shirka wadatashiga ayaa ah dhamaystirka qabyo-qoraalka dastuurka dawalada federaalka ah ee Somaliya.
Waxaa jiri doono shirar gaar ah oo ay yeelan doona madaxada maamulada ka jira Somaliya.
Wejigii 1-aad ee shirka ayaa hore lagu qabtay magaalada Muqdisho.